Ama-remover removes esula abahlinzeki - Isitolo esidayisa yonke impahla makeup removers Abenzi, Factory
Ubuhle obumsulwa ubumnene besikhumba bamboo makeup susa ukuhlanzwa kobuso
LEZI ZIMPAHLA ZOKUPHATHA ZOKUPHAKATHI ZINEMPUYO YOKUPHILA YOKUPHILA YOKUPHILA NOKUCHAZA ISIKHUMBU NGESIKHATHI SIKHIPHA IMPAHLA NABANGCOLI. UKUSHIYA ISIKHUMBU SAKHO SIHLANZEKILE FUTHI SIZIZWE SIQHUBEKA
Ukuhlanza nokuswakama ama-spascriptions asebenzayo okusula amalahle
Lezi zisuli zokususa izimonyo zengezwa ngekhabhoni evuliwe yemvelo, engahlanza futhi ikhiphe, futhi inemiphumela elwa namagciwane nemithi yokulwa nokuvuvukala. Ngeke somise isikhumba ngokweqile ngenxa yokusula amabhaktheriya ebusweni, uthuli namakhemikhali. Ukungezwa kwe-aloe vera kwenza umphumela wokuthambisa wama-wet wipes usebenze kakhulu futhi unakekele isikhumba sakho nezinwele.
Amafutha okususa isikhumba azwela isikhumba azwela
Isula ebusweni sondla isikhumba ngenkathi sisusa ubuso nobuso ukwakheka. Lawa mathambo wokuhlanza amnene afakwa i-acai akhiphe ukuhlanza nokondla isikhumba sakho, kukushiye uzizwa uthambile futhi ubukeka ukhazimula.